Industrial Process Engineering Co.,Ltd – Posted by IPE – Anywhere
– အသက် (၂၅-၃၅) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်.
– (ဃ) လိုင်စင်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်.
– ယာဉ်စည်းကမ်း, လမ်းစည်းကမ်း နားလည်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်သူဖြစ်ရမည်.
– ယာဉ်ကြံ့ခိုင်, ထိန်းသိမ်းမှု ကောင်းမွန်ရမည်.
– မြို့တွင်း, နယ်ဝေး ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်နိုင်ရမည်.
– အရက်သေစာ, ကွမ်း, ဆေးလိပ် သောက်စားခြင်း ကင်းရှင်းရမည်.
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ်များပါဝင်သော ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အပြည့်အစုံ, လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၃)ပုံ, နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကပ်ပြား, သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ, ရဲစခန်းထောက်ခံစာ နှင့် ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာမူရင်း, ပညာအရည်အချင်းအောင်လက်မှတ် (ရှိခဲ့လျှင်) တို့ဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာသို့ (15.5.2019) နောက်ဆုံးထား၍ လာရောက် လျှောက်ထားနိင်ပါသည်.
အမှတ်(၇၁၈), အောင်ချမ်းသာ (၇)လမ်း၊ သာကေတမြို့နယ်